Antenimierampirenena : hahitsy ny lalàn’ny fandovana - ewa.mg
Antenimierampirenena : hahitsy ny lalàn’ny fandovana
News - Antenimierampirenena : hahitsy ny lalàn’ny fandovana
Hitondra fanitsiana ny lalàna
tamin’ny 1968 momba ny fanomezana sy fandovana ny tolo-dalàna avy
amin’ny depiote Rakotomanga Lanto, eny anivon’ny Antenimiera.
Taloha, ny lehilahy miasa ary ny vehivavy mikarakara tokantrano.
Tsy izany intsony izao, fa efa miara-mitady ny roa tonta. Na miasa
ao an-trano aza ny vehivavy, mitondra fandaminana sy fampandrosoana
amin’ny fampandehanana ny tokantrano.
Marina fa nisy ny lalàn’ny
fanambadiana taloha : kitay telo andalana. Efa mizara ho antsasany
avy ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy ny fananana izao. Raha ny
lalàna, ny filaharana amin’ny fahazoana mandova: voalohany mandova,
ny zanaka; faharoa, ny zafikely; fahatelo, ny ray aman-dreny;
fahefatra, ny mpiray tampo; fahadimy, ny zanaky ny mpiray tampo…
Any amin’ny fahavalo vao ilay vady velona amin’izy mivady raha maty
ny iray; ny fahasivy, ny fanjakana no mandray ny fananana.
“Tsy mety ny saina amin’izany raha ny zava-misy amin’izao
fotoana izao: misy miady, misy tsy fifankahazoana eo amin’ny
fianakaviana”, hoy izy. Satria lasa any amin’ny laharana
fahavalo amin’ny fandovana ny vady, nefa izy no niara-nihary
tamin’ny vadiny fony fahavelony. Hatao laharana fahatelo ny vady
amin’ny fandovana, araka ny fanovana nentiny.
L’article Antenimierampirenena : hahitsy ny lalàn’ny fandovana a été récupéré chez Newsmada.
Tarika Mihir’All for Jesus: miezaka hampitodika ny olona amin’ Andriamanitra
Mihir’All for Jesus, tarika mivelatra amin’ny gadona rehetra. Anisan’ny namorona ilay tarika i Abel Andoniaina. Tanora efatra mianadahy no mandrafitra ny tarika izay manana ny tanjony…… « Hira mitory Filazantsara, ny fahatsaran’ilay Nahary, hampitodika ny olona amin’ Andriamanitra, mihitsy, no tanjonay. Rehefa sehatra azo itoriana ny Filazantsara, anehoanay ny voninahitr’Andriamanitra. Anisan’izany, ohatra, ny pejy facebook “Mihir’All for Jesus”, hifandraisana amin’ireo vonona hiaraka hiasa hanatrarana io tanjona io », hoy i Abel Andoniaina. Tsy manavaka antokom-pivavahana rahateo izy ireo fa rehefa mino an’Andriamanitra, mety avokoa.Nanomboka ny taona 2011 ny tarika no naneho an-tsehatra tamin’ny alalan’ny fitetezana ireo fiangonana kristianina maro. Teo koa ny fanafanana lanona sy ireo tolo-tanana isan-karazany. Eo am-panatanterahana ny hira faharoa « Mila manana anao » ny Mihir’All for Jesus, ankehitriny.Efa misy sanganasa maro miparitaka any amin’ny tambajotran-tserasera maro. Anisan’ny nanamarika ny tarika Mihir’All for Jesus, ilay hira “Tanindrazako”. Hira mitory fibebahana sy fiverenana tanteraka amin’Andriamanitra amin’izao zava-misy eran-tany izao. ”Tsapanay tamin’izany fa tonga ny hafatra”, araka ny fanazavan’i Abel Andoniaina.NarilalaL’article Tarika Mihir’All for Jesus: miezaka hampitodika ny olona amin’ Andriamanitra a été récupéré chez Newsmada.
Famorana: niteraka tahotra ny fisian’ny zaza maty
Niteraka tahotra ho an’ny ray aman-dreny manan-janaka lahikely mbola hatao didim-poitra ny fiparitahan’ny vaovao sy sary momba ilay zaza maty vao avy noforaina tamina tambajotra sosialy tato ho ato.Vokatr’izay, lasa mailo ny ray aman-dreny ary manadihady tsara ireo dokotera handray an-tanana ny famorana ny zanany vao manapa-kevitra. Ny sasany mandeha dokotera roa na telo samihafa mihitsy maka toky vao resy lahatra.Ny hafa aza moa nihemotra mihitsy ary hiandry amin’ny herintaona satria nahatsiaro tahotra loatra vokatr’iny tranga niparitaka tamin’ny tambajotra sosialy iny.Efa betsaka ireo dokotera manao famoran-jaza amin’ny fomba amerikanina, tsy mandeha ra amin’izao fotoana ho amin’ny tanàn-dehibe. Aleon’ny ray aman-dreny mandany vola mandeha amin’izy ireny hitsinjovana ny ain-janany.Mbola tena mahasarika ireo any ambanivohitra kosa ny rain-jaza izay efa manana traikefa manokana ihany koa amin’nyfamoran-jaza, saingy mandeha ra ny ratra avy eo.Amin’izao fotoana anefa, betsaka ihany koa ny tranga mpiseho amin’ireny famoran-jaza ireny. Ao ireo dokotera tsy mahatafavoaka tsara ilay famorana ka voatery haverina foraina fanindroany ilay zaza noho izany tsy fahatomombanan’ny fandidiana natao izany.Efa misy ireo dokotera mipetraka ny lazany ary malaza ho mahay tsara ny famorana. Tsy ny rehetra anefa no mahafantatra azy ireny. Efa mametraka avo ny fahaizany koa izy ireny ka lafo dia lafo ny saran’izany fanaovana didim-poitra izany, ao amin’izy ireny.Tatiana AL’article Famorana: niteraka tahotra ny fisian’ny zaza maty a été récupéré chez Newsmada.
Voadonan’ity môtô rehefa nijanona tampoka teo alohany ny fiara tsy mataho-dalana iray marika «Ford Berline». Teny Ivato no nisehoan’io loza io, afak’omaly. Naratra tamin’izany ny lehilahy, 26 taona, nitondra môtô. Simba ihany koa ny kodiaran-droa. L’article Fifandonana fiara sy môtô est apparu en premier sur AoRaha.
FAHASALAMANA :: Nihena ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza eo am-piterahana
Vokatra tsara. Nidina ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza eo am-piterahana tamin’ny Faritra 16 nandritra ny fametrahana ny fandaharanasa ho an’ny fahaveloman’ny reny sy ny zaza na MCSP, izay nanomboka nihatra tamin’ ny taona 2014. Raha 250 no maty isan-taona dia nihena ho 19 ankehitriny. “ Matetika zaza iray ao anatin’ny telo no maty alohan’ny hahaterahany satria betsaka ny olana mitranga eo am-piterahana. Amin’izao fotoana izao, dia nihena be izany araka io antontan’isa io na eny amin’ny hopitaly na CSB”, hoy Razafimandimby Eliane Ramiandrison, talen’ny fandaharan’ asan’ny MCSP. Toeram-pitsaboana fototra na CSB sy hopitalin’ ny distrika na CHRD miisa 822 ao anatin’ny Faritra 16 no niasan’ity fandaharanasa ity. Anisan’izany i Diana, Sava, Boeny, Melaky, Sofia, Analamanga, Vakinankaratra, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Amoron’i Mania, Ihorombe, Atsinanana, Analanjirofo sy Ihorombe ary Atsimo Andrefana. Nahatratra efajato sy arivo ny olona nisitraka ny fampiofanana.“Nahazo fiofanana izahay amin’ny fomba fampiterahana. Teo ny fisorohana ny fahaverezan-drà eo am-piterahana amin’ ny alalan’ny tsindrona. Betsaka ny olona nanatona toeram-pitsaboana tao anatin’izany. Tao anatin’ny roa volana nahatratra 145 no tonga niteraka teto amin’ny CSB raha tany amin’ny renin-jaza foana hatramin’izay. Ny taona 2015 no nisy zaza efatra maty teo am-piterahana fa rehefa nahazo io fiofanana io aho dia tsy nisy intsony izany”, raha ny fanamafisan’ Andriamasoandro Edy, lehiben’ ny CSB II Anjiamangirana ao amin’ny distrikan’ Antsohihy. L’article FAHASALAMANA :: Nihena ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza eo am-piterahana est apparu en premier sur AoRaha.
Judo-Afrika seniors: nahazo medaly alimo efatra i Madagasikara
Nifarana, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, ny andiany faha-41, ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika “seniors”, taranja judo. Ny teo amin’ny fifaninanana isam-bondrona ny namaranana izany, mbola nahazoan’i Madagasikara laharana fahatelo ka nahatafakatra ny isan’ny medaly ho efatra ho an’ny mpikatroka malagasy. Azo lazaina ho tsy nitsanga-menatra, araka izany, isika, raha io vokatra io. Raha hiverenana izay efatra andro nifaninanana izay, Rakotovao Narindra (-57kg), sokajy vehivavy, ny nisantatra ny fisalorana ny medaly, tamin’ny andro voalohany. Teo amin’ny faharoa, ny nandrombahan-dRatsimiziva Fetra (-81 kg), sokajy lehilahy, ny medaly alimo faharoa ho an’i Madagasikara, raha toa ka Ramiandrisoa Haingoniaina Durianah (+78 kg) kosa ny namarana ny fisalorana medaly, ho an’ny Malagasy, tamin’ny andro fahatelo, teo amin’ny fifaninanana samirery. Tsy nijanona hatreo anefa fa nampitomboin-dry Fetra sy ry Laura ho efatra ny medaly azon’ny Malagasy, nandritra ny fifaninanana isam-bondrona, omaly. Nahazo ny laharana fahatelo i Madagasikara rehefa samy nandresy ny mpifanandrina taminy, tamin’ny ippon, Ratsimiziva Fetra sy Rasoanaivo Laura. Ity mpikatroka malagasy vehivavy ity izay tena manana ny hoaviny amin’ity taranja ity, raha jerena ny fahaiza-manaony sy ny taonany.Amin’ny ankapobeny, saika nifampizaran’ireo firenena sangany ny medaly volamena, saingy i Egypta ny nahazo betsaka indrindra, mialoha an’i Alzeria sy i Senegaly.“Tanteraka ny fanamby napetraka ny hahatontosa antsakany sy andavany ity fifaninanana iraisam-pirenena goavana ity teto Madagasikara”, hoy ny nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny judo, Randrianasoloniaiko Siteny. Anio ny hotodi-doha any amin’ny firenena niaviany avy ireo delegasiona vahiny rehetra. Mi.RazL’article Judo-Afrika seniors: nahazo medaly alimo efatra i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Antenimieram-pirenena :: Hijoro ho hery afovoany ny vondrona parlemantera repoblikana
Sady tsy ho mpanohana no tsy ho mpanohitra ny fitondram- panjakana. Tafatsangana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny Vondrona parlemantera repoblikana (Gpr), tarihin’ny depiote Rakotomamonjy Nepatraiky. Nambarany fa “hijoro ho hery afovoany izy ireo ary tsy homba na hanohitra ny fitondrana”. Miisa iraika amby roapolo ireo depiote ao anatin’ity vondrona parlemantera ity, izany hoe mihoatra dimy amin’ny Vondrona parlemantera Tiako i Madagasikara. Notsipihin- dRakotomamonjy Nepatraiky fa fototra hijoroan’ny vondrona parlemantera tarihiny ihany koa ny fipetrahana ho mpanolo- kevitra amin’ireo fanapahan-kevi-dehibe hoentina mampan- droso ny firenena. “Isan’izany, ohatra, ny momba ny fanolorana anarana Praiminisitra”, hoy izy. L’article Antenimieram-pirenena :: Hijoro ho hery afovoany ny vondrona parlemantera repoblikana est apparu en premier sur AoRaha.
Fanadiovana :: Noesorina avokoa ireo mpivarotra nanerana an’Analakely
Nanao be midina vao maraina nanemitra ny nanerana an’Analakely ny ekipan’ ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) niaraka tamin’ireo olon’ny Polisimpirenena, nanomboka tamin’ ny zoma alina. Raikitra ny fanadiovana faobe, nandritra an’ iny faran’ny herinandro iny, niainga teny Andohan’Analakely ka hatreny amin’ny gara Soarano. Isan’ny natao tamin’izany ny fanentanana ireo mpivarotena, fanesorana ireo mpivarotra toaka amoron-dalana sy ny mpisotro toaka ao anaty fiara. Nihatrana vao maraina (sabotsy) teny an-toerana ny Polisy monisipaly sy ny Polisim-pirenena niaraka tamin’ ny mpamonjy voina ary ny ekipa sasany tao amin’ny kaominina, nandritra ny fanatanterahana an’izao asa fanadiovana izao. Norarana, tsy toy ny isan’andro, ireo mpivarotra mameno fiantsonana hatrany ambanin’ny “Arcade”. Noesorina hatramin’ ireo mpanamboatra finday sy ireo fiara maty izay niantsona an-taonany teny an-toerana. Natao ireo peta-drindrina mikasika ny toromarika miantefa amin’nyolona rehetra mandalo amin’iny toerana iny mba ho fanajàna ny fahadiovana sy ny fandaminana ny tanàna. Notohizana ihany koa ny fanentanana an’ireo mpandalo amin’ny fanajàna ny toerana fiampitana eny amin’ny arabe. L’article Fanadiovana :: Noesorina avokoa ireo mpivarotra nanerana an’Analakely est apparu en premier sur AoRaha.